El Morro Eco Adventure Hotel w/WIFI + NGESASA
Eli gumbi likhethekileyo ukuya kwiindwendwe ezi-2 likwiphondo laseMontecristi, kumantla ntshona eDominican Republic e-El Morro Eco Adventure Hotel. Amagumbi azimeleyo ngokupheleleyo kwaye axhotyiselwe intuthuzelo yakho. Isidlo sakusasa sifakiwe!
IMontecristi ijikelezwe luLwandlekazi lweAtlantiki ukuya emantla kwaye inemozulu eyomileyo, eneentlobo-ntlobo ezinomdla zendalo ezinomtsalane. Likhaya leendawo ezintle zomhlaba, iilwandle zesanti erhabaxa, amanzi acwengileyo acwengileyo kunye neepaki zendalo.
Idesika engaphambili (7AM-11PM)
Indawo yokutyela (7AM-11PM)
Iphuli yabadala kunye nabantwana (10AM-6PM)
Iilwandle ezintathu kwiimitha ezimbalwa ukusuka kwipropathi
Iindawo zeNtlanganiso zemisitho
IMontecristi ijikelezwe luLwandlekazi lweAtlantiki ukuya emantla kwaye inemozulu eyomileyo, eneentlobo-ntlobo ezinomdla zendalo ezinomtsalane. Likhaya leendawo ezi…
Nangona umhlaba umqwebedu, lilizwe elinemveliso. Apha kukho amasimi amakhulu eebhanana eziphilayo, irayisi, iitumato, iicapers kunye nezinye izinto zezolimo. Namhlanje, iphondo lelona livelisa iibhanana eziphilayo kunye netyuwa yolwandle eyenziwe kusetyenziswa iindlela zemveli kweli lizwe. Ngummandla owodwa onikwe ubutyebi bendalo apho ukhenketho olwahlukeneyo lunokufikelelwa. Ngeendawo ezili-9 ezikhuselweyo, izele yimitsalane yendalo kunye neentlobo-ntlobo zezityalo nezilwanyana eziphilayo, nto leyo eyenza ibe yindawo yokusingwa ye-ecotourism. Ihlala iMontecristi National Park. Inommandla omkhulu we-mangrove elizweni kunye neentlobo ezine ze-mangrove kunye ne-barrier reef enkulu. Sisiqalo solondolozo lweentlobo ezimbini ezitshabalalayo: i-manatee kunye nofudo lweHawksbill. Apha ungaphonononga iilwandle ezintle, uzilolonge imidlalo emininzi kwaye uye kuhambo. Umgama oqikelelweyo: 270 km ukusuka eSanto Domingo 137 km ukusuka ePuerto Plata 114 km ukusuka eSantiago de los Caballeros